Dhibaatada Ingiriisiga ah: dib ugu soo noqoshada qaybta Fako ka dib magaalooyinka dhintay ee 10 - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Dhibaatada Ingiriisiga: ku noqo mid caadi ah qaybta Fako ka dib magaalooyinka dhintay ee 10
Dhibaatada Ingiriisiga: ku noqoshada caadiga ah ee qeybta Fako ka dib magaalooyinka dhintay ee maalmaha 10
Noloshu waxay si tartiib tartiib ah ugu soo noqotaa qaybo ka mid ah Qaybta Fako ee koonfur galbeed ee Cameroon ka dib markii magaalooyinka magaalooyinku ay ku soo rogeen 4 April 13. Xayiraadda toban-maalmood ayaa waxaa soo raacay magaalo-dagan Isniintii 2019 April.
Magaalooyinka dhintay ayaa loogu talagalay inay ka hortagaan Bandhigga Farshaxanka Farshaxanka iyo Dhaqanka ee Limbe oo ka dhacay magaalada Limbe ee 6 ee 13 bishii April. Separistayaasha waxay aaminsan yihiin in dhacdooyinka sida FESTAC aan loo baahnayn inay dhacaan waqtiyada dagaalka, gaar ahaan wakhtiga ay dadku barooranayaan dadka ay jecel yihiin. Inkasta oo FESTAC ay si habsami leh u socotay magaalada Limbe, qaybaha kale ee qaybta Fako ayaa weli xannibmay.
Dhammaan qaybta Muyuka ayaa la xannibay, taas oo curyaan ah ku dhex socotay waddada Buea-Kumba. Gaadiidka ayaa dib loo soo celiyay Abriil 14, laakiin waxa uu ahaa mid gaaban oo degan magaalada sababtoo ah dagaalada Isniinta. Sida laga soo xigtay warbixinnada, taraafikada ayaa dib u bilaabay wadada Talaadada iyada oo cabsi badan leh.
Qeybaha qeybta hoose ee Buea iyo Tiko ayaa saameyn ku yeeshay go'doomin. Duqa magaalada Buea, Ekema Patrick Esunge, ayaa ku dagaalamay dagaal xooggan oo looga soo horjeedo magaalooyinka dhintay, laakiin waxay ka tagi kartaa Molyko ilaa Buea. Meelaha laga soo galo Mile 17 ilaa Muea iyo Mile 16 ilaa Mile14 way madhan tahay. Gobolka Mile 4 ee kuyaal Limbe, oo la siiyay Wotutu, ayaa sidoo kale curyaan ah muddadii u dhexeysay, inkasta oo magaaladii Limbe ay sii noolaato.
Ka dib markii magaalooyinka dhintay sabab, qiimaha u dhexeeya Buea iyo Limbe iyo qeybsanaan ku xigeenka ka 1 000 2 000 FCFA FCFA labanlaabantay. Qiimaha Buea Douala ku kordheen tan iyo 2 000 5 000 FCFA FCFA ku xiran dabeecad ka mid ah helitaanka darawalka iyo gaadhiga. Caasimadda gobalka koonfur-galbeed, xafiisyada dawladdu waxay furnaayeen horaantii 8h00 Talaadadii, halka qaar ka mid ah tagaasida iyo baaskiilada lagu arkay waddooyinka.
Magaalooyinka dhimatey ma saameynin kaliya qeybinta Fako, laakiin sidoo kale qaybaha deriska ah ee meelaha hawlaha gaadiidka ah la baabiiyay. Wakaaladaha gaadiidku waa inay dib u bilaabaan gaadiidka safarka maalmahan ka dib fasax laba toddobaad ah.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/17/crise-anglophone-retour-a-la-normale-dans-la-division-de-fako-apres-des-villes-mortes-de-10-jours/
wali balaayiin ku iibsashada baabuurta cusub ee Biya halkan waa faahfaahin - CAMEROON MAGAZINE